Lily pad jasper inta badan si khalad ah ayaa loogu yeedhaa lily pad obsidian - Fiidiyow
Tags Jasper, Suufka Lily
Ka iibso dukaanka jasper dabiiciga ah ee ubaxa dabiiciga ah ee ubaxa dabiiciga ah
Lily pad jasper inta badan si khalad ah ayaa loogu yeedhaa lily pad obsidian. Hase yeeshe way sahlan tahay in la garto iyadoo la tijaabinayo jabka, adkaanta, ama culeyska gaarka ah ee aaladda aasaasiga ah ee gemological.
Lily pad jasper, isku-darka isku-dhafka 'microgranular' ama chalcedony iyo wejiyada kale ee macdanta, waa midab buluug ah, aan caadi ahayn oo silica ah, badiyaa casaan, jaale, bunni ama cagaar midab leh, iyo dhif buluug ah. Midabka casaanka ah ee caadiga ah waxaa sabab u ah ku-daridda birta. Jasper wuxuu u jajabiyaa meel siman oo waxaa loo isticmaalaa qurxinta ama dhagaxyada. Waxay noqon kartaa mid aad u wanaagsan oo loo farsameyn karo waxaana loo adeegsan karaa waxyaabaha ay ka mid yihiin mirootada, xargaha, iyo sanaadiiqda. Cufnaanta gaarka ah ee Jasiiradda waa caadi ahaan 2.5 illaa 2.9.
Jasper waxaa wax looga beddeli karaa kala-jaadnimada macdanta iyada oo la adeegsanayo joojinta muuqaalka kore ee koritaanka daaqsinka, ie, dendritic. Alaabada asalka ah ayaa badanaa la jebiyaa ama la qalloociyaa, ka dib dhigista, qaabab kala duwan, oo markii dambe ay ka buuxaan macdano kale oo midab leh. Cimilo-qabashada, iyada oo wakhtiga la joogo, ayaa abuuri doonta dillaacyo waaweyn oo midabeysan.
Jasiiradaha sawirka leh waxay soo bandhigaan isku darka qaababka, sida faashad ka imaashada qulqulada ama qaababka kaydinta biyaha ama dabaysha, kala duwanaanta midabaynta ama midabaynta, taasoo dhalisay waxa u muuqda muuqaallo ama sawirro, qayb goyn ah. Kala-jajabeynta xarun waxay soo saartaa muuqaal u gooni ah oo orbicular ah, jasper maqaarka maqaarka ah, ama xargaha faashadda ka soo jaban sida lagu arkay leasgang jasper. Dhagax la bogsiiyey, oo burburay ayaa soo saaray Jasiirad burbursan.
Lily pad jasper micnaheedu
Dhagxaantaani aadka u kobcisa waxay nabad ku keentaa waqtiyada walaaca, waxay bixisaa isku dheelitirnaan iyadoo kor u qaadeysa geesinimada iyo go'aan qaadashada, waxay joojineysaa isla markaana caawineysaa sii deynta maandooriyaha iyo jahwareerka.